Iyo Cook Islands Vimbiso Kupokana neCOPVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Akasiyana Nhau » Iyo Cook Islands Vimbiso Kupokana neCOPVID-19
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Cook Islands Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
The Zvitsuwa Kuku inoshuma kuti yanga ichiri uye ichiri inongori COVID-19-yemahara zone. Iyo "Cook Islands Chipikirwa" chibvumirano chakabatana kuchengetedza vese Cook Islands vagari uye vashanyi vekunze kubva COVID-19. Hurumende yatanga zvirongwa zvinoverengeka zvekubatsira kuchengetedza uye kugadzirira kana miganhu yakavhurwa kusanganisira chirongwa che "CookSafe" chekutsvaga kutsvaga uye "Kia Orana Plus" inodzidzisa chirongwa chekudzidzisa.
Iyo Cook Islands Vimbiso inoshanda kudzivirira kubva kune yakanyanya acute yekufema chirwere chetachiona chinozivikanwa seCCVID-19. Ipo nyika ichivimba kuvhurazve miganhu kuNew Zealand, hurumende inosimbisa kune vese vashanyi nevashandisi vekushanya kukosha kwekushandisa pragmatic kudzikira kwemuviri uye nhanho dzakanaka dzehutsanana.
Iyo Cook Islands Vimbiso yakaziviswa muna Kubvumbi 16, 2020 ichitsigira nyika senzvimbo yeCOVID-19-yemahara. Zvinoenderana neruzivo rweCenters for Disease Control and Prevention (CDC) webhusaiti, maCook Islands haasati amhan'ara data pamatare eCOVID-19 kuWorld Health Organisation. Naizvozvo, inofunga kuti njodzi yeCOVID-19 muCook Islands haizivikanwe.
Prime Minister Hon. Henry Puna anova zvakare Gurukota rezveKushanya, akati kuzvipira kwavo kunoshanda munzvimbo nhatu: iyo General Zone, Yekuongorora Nzvimbo, uye Yekugara Nzvimbo. Nzvimbo yega yega inoda zviito kubva kuCook Islands uye kubva kune vashanyi.
MuGeneral Zone, pragmatic panyama distancing inokurudzirwa. Dzivisa nzvimbo dzakatsvikinyidzana, marongero epedyo ekuonana, uye nzvimbo dzakavharirwa kana dzakapoteredzwa Chengeta mukati memhuri yako yepedyo uye shamwari bubble. Kana mukati memamirimita maviri evanhu vari kunze kwebhodhoro rako, dzivisa kusangana kwakananga, kunyanya avo vari panjodzi.
Geza maoko ako nguva dzose, vhara kukosora uye kuhotsira, uye dzivisa kubata kumeso kwako. Masiki anokurudzirwa kana iwe uine chikosoro kana kana kuremara kwemuviri kusingaite.
Dzivisa kubata zvisina kukodzera kwezvinhu muzvitoro kana pameso.
ZVESE ZVAKAITWA ZVEVANHU NEZVINHU ZVAKAITIKA, ZVOKUENDESA, ZVINOITIKA ZVENYU.
Maresitorendi, Kafesi uye Eateries: Wongorora zvekudya zvekudyira neako pekugara, ivo vanogona kunge vachikwanisa kupa ruzivo rwekushandira mukamuri, mune yekudyira yekumba, kudya kwekutora, kana kuendesa chikafu. Kudya kunze kunotenderwa, zvisinei, ndokumbirawo ubvise kuitira kuti usazadzikane.
Veruzhinji Zvifambiso (zvemumba nendege, mabhazi uye kuendesa): Kureba kwemuviri kunogona kusakwanisika nguva dzese, ndapota tevera kutungamira kweanokukoka; Dzivisa kubata zvisina basa kwenzvimbo uye kusangana zvakananga nevari kunze kwebhodhi rako. Geza kana kushambidza maoko ako nguva dzose.
Bhawa uye maNightclub, Zvinonakidza, Sites, Shops nemaHofisi: Dzivisa kusangana kwakananga neavo vari kunze kwebhodhi rako uye nekubata zvisina kufanira kwenzvimbo. Ndokumbira utarise nevashandi pamitemo yekuchengetedza, kana isina chokwadi.
KUSHANDIRA KUNA ZVINHU ZVESE zvekugara ZVINOSANGANISIRA DZIMBA DZEHOLIDI, AIR BNBs nezvimwewo. VANOGARA VANODZIDZISA NDIYO PEKUTANGIRA YEKUTANGANA YEKUDZIDZISWA UYE RUBATSIRO.
Recei: Iva wakagadzirira kushoma kwekutarisana nekutarisa uye kutarisa; Ita shuwa kuti zvako zvemunhu zvakapihwa kune wako wekugara usati wasvika.
Mukwende: Kuti udzivise kusangana kusiri madikanwa, kana uchinge wakumbira, mukwende wako unogona kuunzwa wakananga kusuo rako. Tinokukurudzira kuti usapfuure pakiti uye utenge zvekudya nezvinwiwa munharaunda.
Kushumira Kwemakamuri: Tinokurudzira kushandira pasina makamuri emakamuri uye tinokumbira rubatsiro rwako kuti ubve mukamuri mukati menguva yekushandira mukamuri. Bvunza wako wekugara.
Dzimba dzimba (Chikafu & Bhawa): Funga kukumbira wako anokuchengeta kuti uchengetedze firiji yako uye mapenji usati wasvika.